အွန်လိုင်းစတိုးအုပ်ချုပ်ရေး Watch-edition.ru မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများသည်ထံမှလက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များ၏ပြီးပြည့်စုံသောလျှို့ဝှက်ချက်များကိုအာမခံ။ ဖောက်သည်များနှင့်အတူအားလုံးလုံခြုံရေးမူဝါဒအခွအေနကေိုနှင့်အလုပ်ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေရေးရာစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်လုပ်ရပ်များအပေါ်အခြေခံထားတယ်။
သငျသညျမှတ်ပုံတင်စဉ်ကရိုက်ထည့်ပါအချက်အလက်တွေအားလုံးကိုလုံခြုံတဲ့ဒေတာဘေ့စထဲမှာသိမ်းထားတဲ့လိမ့်မည်။ ဆိုင်အွန်လိုင်း Watch-edition.ru အာမခံချက်အပြည့်အမိန့်၏ကွပ်မျက်အတွက်လျှို့ဝှက်, နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်အကြောင်းကိုဖောက်သည်သတင်းအချက်အလက်သာအဝင်အမိန့်၏ကွပ်မျက်အတွက်အသုံးပြုလိမ့်မည်။
သင့်ရဲ့မှတ်ပုံတင်အချက်အလက်များ, ငါတို့သည်ငါတို့၏မန်နေဂျာတယ်လီဖုန်းအားဖြင့်သင်တို့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ခဲ့ကြသည်, ပို့ဆောင်မှုဝန်ဆောင်မှုအချိန်ပေါ်လက်ျာရာအရပျဖို့အမိန့်ထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများကယ်တင်နိုင်ခဲ့ကြောင်းသေချာစေရန်သာလိုအပ်ပါတယ်။
ကုန်ပစ္စည်းများ, အရောင်း, အထူးအစီအစဉ်များသစ်ကိုစီးဆင်းမှု: အပြင်, မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုပုံသင်တို့သည်ငါတို့၏စတိုးဆိုင်၌ရှိသမျှသောသတင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းအချက်အလက်လက်ခံရရှိလိမ့်မည်။
သင်ခွင့်ပြုချက်, စတိုးဆိုင်များတွင်မှတ်ပုံတင်နှင့် ပတ်သက်. မည်သည့်ပြဿနာမျှသို့မဟုတ်မေးခွန်းများရှိပါက - အီးမေးလ်လိပ်စာ info@watch-edition.ru မှာကျွန်တော်တို့ကိုဆက်သွယ်ပြီးကျမတို့ကိုအမြဲသင့်ကိုကူညီကျေးဇူးပြုပြီး!
အင်တာနက်ဆိုင်ကိုယ်စားလှယ်များခရက်ဒစ်ကဒ်သတင်းအချက်အလက်သို့မဟုတ်အခြားအထိခိုက်မခံသောသတင်းအချက်အလက်များကိုသင်မေးဘယ်တော့မှ Watch-edition.ru ။
1 ။ ဒီ site ပေါ်တွင်အခြို့သောအရာဝတ္ထုအဆိုပါအွန်လိုင်းစတိုး Watch-edition.ru ၏မူပိုင်ဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ site ၏ပိုင်ရှင်များ၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်မပါဘဲထိုကဲ့သို့သောအဆောက်အဦများအသုံးပြုမှုအားပိတ်ပင်တားမြစ်သည်။
2 ။ အဆိုပါ site ကို Watch-edition.ru အွန်လိုင်းစတိုးများ, အခြားဆိုက်များကိုသှားဖို့လင့်များရှိပါတယ်။ ကျနော်တို့ဒီဆိုက်များပေါ်မှာပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသတင်းအချက်အလက်များတာဝန်ရှိသည်မဟုတ်, သာသင့်ရဲ့ site ကိုမှဧည့်သည်များအဘို့အဆင်ပြေပေးနိုင်ရန်အတွက်သူတို့ကိုလင့်များပေးပါသည်။
1 ။ ဆိုင်အွန်လိုင်း Watch-edition.ru ပေးမျှသတင်းအချက်အလက်များရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း၏လက်ရှိဥပဒေပြုခြင်းဖြင့်သတ်မှတ်သောကိစ္စများတွင် မှလွဲ. တတိယပါတီများမှပေးလိမ့်မည်မဟုတ်ပေဘယ်တော့မှနှင့်မျှမအခြေအနေများအောက်တွင်လိမ့်မည်ဟုသေချာ။
2 ။ အချို့သောအခြေအနေများတွင် Watch-edition.ru အွန်လိုင်းစတိုးပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များကိုမှတ်ပုံတင်ပြီးပေးသငျသညျကိုမေးလိမ့်မည်။ ပံ့ပိုးပေးထားသည့်အချက်အလက်များကိုသာဆိုင်တစ်ဆိုင်တွင်အမိန့်များအပြောင်းအလဲနဲ့အတွက်အသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်တိကျတဲ့သတင်းအချက်အလက်မှဧည့်သည်ဝင်ရောက်ခွင့်ပေးရန်။
3 ။ သင်သည်သင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအချက်အလက်များ update ကိုပြောင်းလဲသို့မဟုတ် "My Account" အောက်မှာသည့်အချိန်တွင်မဆိုဖျက်ပစ်နိုင်ပါတယ်။
4 ။ သင့်ရဲ့ရှင်းလင်းပြတ်သားစွာသဘောတူခွင့်ပြုချက်နှင့်အတူအွန်လိုင်းစတိုး Watch-edition.ru ၏သတင်းအချက်အလက်တိကျသောမျိုးနှင့်တကွသင်ပေးနိုင်ရန်အတွက်သတ်မှတ်ထားတဲ့ e-mail လိပ်စာမှတ်ပုံတင်သတင်းအချက်အလက်မက်ဆေ့ခ်ျများပေးပို့အကြောင်းကြားနိုင်ပါကြောင်း။ မည်သည့်အချိန်တွင်သငျသညျနှုတ်ထွက်နိုင်ပါတယ်။
5 ။ ဒီ site ပေါ်တွင်ပြန်ကြားရေးသဘောသဘာဝအတွက်သက်သက်သာသိကောင်းစရာများရှိပါတယ်, သူတို့ကကြိုတင်သတိပေးခြင်းမရှိပဲမည်သည့်အပြောင်းအလဲများကိုစေနိုင်ပါတယ်။
ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်အတူလိုက်နာမှုနှင့်ဆက်စပ်သောအားလုံးကိစ္စများတွင်, မူပိုင်ခွင့်နှင့်အခြားကိစ္စရပ်များတွင် - info@watch-edition.ru မှာအုပ်ချုပ်ရေး site ကိုရည်ညွှန်း